सी जिनपिङका महान भनाइहरू – आफ्नो प्रेरक संसार
Bibas chetan — २ मंसिर २०७६, सोमबार १८:१५0comment
चीन जहिले पनि विश्व शान्तिको निर्माणकर्ता, विश्वव्यापी विकासको लागि योगदानकर्ता, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको समर्थनकर्ता रहनेछ।
सभ्यता र पाँच हजार वर्षभन्दा लामो विकासका प्रक्रियामा चिनियाँ राष्ट्रले मानव सभ्यता र प्रगतिमा अमिट योगदान पुर्‍याएको छ।
पेट भरिएका र काम नभएका केही विदेशीहरू हामीलाई औँल्याउन मै व्यस्त रहन्छन्। पहिलो कुरा, चिनले विद्रोह निर्यात गर्दैन, दोस्रो यसले भोकमरी र गरिबी निर्यात गर्दैन र तेस्रो यसले तपाईसँग गडबड गर्दैन। त्यसो भए अरू के भन्न बाँकी छ?
आफूलाई विश्वास गर। तिम्रो क्षमतामा विश्वास राख।आफ्नै शक्तिहरूमा विनम्र तर उचित विश्वासबिना तिमी सफल वा खुसी हुन सक्दैनौ।
इतिहासको लामो प्रक्रियामा, आफ्नै लगनशीलता, साहस र बुद्धिको भर परेर चिनियाँहरूले एक राम्रो र सुन्दर घर बनाएका छन् जहाँ सबै जातीय समूहहरू मेलमिलापमा बस्छन् र एक उत्कृष्ट संस्कृतिलाई हुर्काएका छन् जुन कहिल्यै ढल्दैन।
सोभियत संघ किन बिघटन भयो? सोवियत कम्युनिष्ट पार्टी किन पतन भयो? एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यो थियो कि उनीहरूको आदर्शहरू र विश्वासहरू हल्लिए।
चिन कठिनाइ र कठिनाइको माध्यमबाट बनेको छ तर अदम्य रहन्छ।
चिन सरकारले आफ्ना देशका कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी बन्न सहयोग पुर्‍याउँछ। तर हामी विश्वास गर्छौं कि यो प्रक्रिया बजारमुखी हुनुपर्दछ, कम्पनीहरू मुख्य चालक बनेर।
यहाँका जनता एक महान व्यक्तिहरू हुन्; उनीहरू मेहनती र साहसी छन्, र उनीहरू प्रगतिको खोजीमा कहिल्यै रोकिदैनन्।
केवल प्रकृतिको कानून पालन गरेर मात्रै मानवजाति यसको शोषणमा महँगो गल्ती हुनबाट बच्न सक्छ। प्रकृतिमा हामीले ल्याउने कुनै पनि हानि अन्ततः हामीलाई सताउनमा फर्किनेछ। यो हामीले सामना गर्नुपर्ने वास्तविकता हो।
राम्रा र महान भनाइहरू पढ्नका लागि आफ्नो न्युज लाइक र शेयर गर्नुहाेस्
महान भनाइहरू राम्रा भनाइहरू सी चिनफिङ सी जिनपिङ